7 Izimpophoma Ezinhle Kunazo Zonke eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Izimpophoma Ezinhle Kunazo Zonke eYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/04/2021)
Ukuya eYurophu kubuya emuva esikhathini ezweni elakhiwe lasezigodlweni, amahlathi, nemvelo enhle kakhulu nezimpophoma. Ukuthi uya e-Italy noma eSwitzerland, ukuhlela a 2 uhambo lwezinyanga ezingama-euro, noma ube nesonto izwe elilodwa laseYurophu, kumele wenze isikhathi sokuhlola 1 ngezimpophoma ezinhle eYurophu, ohlwini lwethu 7 izimpophoma amahle kakhulu eYurophu.
1. Izimpophoma Ezihle Kunazo Zonke eYurophu: Izimpophoma ZaseMarmore, Italy
Impophoma yaseMarmore ifinyelela 165 m ngokude kakhulu kuphume 3 ekuphakameni kwe 85 m. Ngakho-ke, impophoma emide kakhulu eyenziwe ngabantu eYurophu i-Marmore waterfall. Le mpophoma ebabazekayo Itholakala enhliziyweni yesifunda i-Umbria futhi yadalwa ngamaRoma asendulo.
Amatshe anemibala emhlophe nezimpophoma ezinamazinga amaningi afinyelelwa kalula ngesitimela esisuka eRoma Termini siya edolobheni laseTerni. Izitimela eziya eTerni zivame kakhulu futhi isitimela sisuka njalo ngehora. Lapho ufika esiteshini sesitimela saseTerni, kunamabhasi angakuhambisa ekuphanjeni kwamanzi. Kunemali yokungena ezimpophomeni.
Nokho, ngethikithi lesitimela laseTrenitalia uthola isephulelo futhi leyo enye inzuzo yokuhamba ngesitimela uye ezimpophomeni zaseMarmore:)
Ithiphu encane yangaphakathi evela kithi isiya kuwe, bangu zokudlela ezinhle phansi kwezimpophoma zaseMarmore, kepha sincoma kakhulu ukubamba i-panini okufanele uhambe kuyo eDa Panzerotto. Ukuba ne epikinikini endaweni ethule nge-waterfall ingcono kakhulu kunesipiliyoni sokuvakasha.
IRoma ukuya kumathikithi eTerni
2. Izimpophoma zeGeothermal, Italy
Impophoma eyaziwa kakhulu futhi ethwebula izithombe e-Italiya iyimpophoma yamadolobhana edolobhaneni laseDi Saturnia. Itholakala eTuscany, Iziphethu ezishisayo zeSaturnia zingenye enhle kakhulu iziphethu zemvelo ezishisayo eYurophu. Leli dolobhana eliyikhaya lesiphethu esudumile esidumile kusukela ezikhathini zamaRoma. Iholide lakho le-Tuscany ngeke liphele ngaphandle kosuku ku-izimpophoma ezishisayo zikaSaturnia. Iziphethu zinhle ngokuphumula ngemuva kokuvakashela ezinye izimpophoma ezinhle eziseduze, Isigidi, kanye nokuwa kweGorello.
Izimpophoma zeSaturnia ezimangalisa yilezi ngesitimela kude neRoma. Okokuqala, uthatha isitimela ku-Orbetello-Monte Arg. futhi ukusuka lapho ungafinyelela izimpophoma ezinhle ngemoto noma ngetekisi, konke kungaphansi 3 amahora ukusuka eRoma.
I-Roma iye amathikithi e-Orbetello Monte Argentina
3. Izimpophoma Ezihle Kunazo Zonke eYurophu: Izimpophoma zaseRhine, Switzerland
Ukugibela i-Worth Castle nesigodlo saseSchloss Laufen, Izimpophoma zaseRhini kungenye yezimpophoma ezinkulu kakhulu eYurophu. Ekuboneni kokuqala, Izimpophoma zaseRhini zibonakala zimfushane kakhulu, kepha banzi kakhulu. Uzokwazi ukuthola lezi zimpophoma ezinhle kuyo yonke inkazimulo yazo kusuka ku ukugibela isikebhe emfuleni.
Kungcono ukuvakashela izimpophoma zaseRhine ehlobo ngemuva kokuncibilika kweqhwa futhi konke okuzungezile kuluhlaza okotshani. Izimpophoma zaseRhine yilezi 50 ukuhamba ngesitimela kude neZurich futhi empeleni kukhona iziteshi ezimbili zezitimela ezinhlangothini zombili zezimpophoma. Ngakho-ke, Kulula kakhulu ukuya izimpophoma ezimangalisayo zombili imindeni futhi abahambi solo.
I-Berlin kuya amathikithi ezitimela eZurich
I-Basel kuya amathikithi ezitimela eZurich
Amathikithi eVienna kuya eZurich Isitimela
4. I-Staubbach Falls, Switzerland
Idlula idolobhana lase-alpine elihle, Impophoma yase Staubbach esigodini saseLauterbrunnen eSwitzerland yinhle kakhulu. Isimo esijikeleze le mpophoma emide sifana nomdwebo wothando. Kukhona empeleni 72 izimpophoma esigodini saseLauterbrunnen, kodwa ngaphandle kokungabaza, I-Staubbach waterfall iyindawo enhle kakhulu futhi yothando kunabo bonke. Ngesikhathi sentwasahlobo, isigodi siphila ngemibala emihle futhi izinga lokushisa elinethezekile livumela ukuhamba ngezinyawo nokuhlola indawo.
Abanye bathi lesi sigodi saseSwitzerland siphefumule inoveli kaJRR.R Tolkein's Rivendell, mhlawumbe obehlala edolobhaneni elincane futhi ebabaza imibono yokuphanjaniswa kwamanzi okuyi-cafe ezinyaweni zayo.
Izikhukhula zamanzi zaseSeaubbach zisondelene nedolobha i-Bern futhi ungafika esigodini saseLauterbrunnen ngaphansi kwesilinganiso 3 amahora ngohambo lwesitimela ukusuka eLucerne noma ngaphansi kwesilinganiso 4 amahora ukusuka eGeneva. Kusuka esiteshini sesitimela, Izimpophoma zihamba ibanga elide futhi udinga nje ukuwela isikhungo sedolobha.
Lucerne kumathikithi weLauterbrunnen
Ukuvuselela amathikithi weLauterbrunnen
ILucerne kumathikithi ahlanganisiwe
I-Zurich kumathikithi Ahlanganisiwe
5. Izimpophoma Ezihle Kunazo Zonke eYurophu: Stuibenfall, ITroli, Austria
Uma uthanda ngokweqile futhi ufuna ukubukwa okuhle ikakhulukazi, uzokuthanda ngokuphelele ukuqubuka kwamanzi eStuibenfall eTirol. Amabhuloho okumiswa nemibhoshongo evunguza emoyeni enza ukuhamba kule mpophoma emangalisayo kube mnandi futhi kujabulise. Ukuphaphama kweTrisol okude kakhulu nokukhulu kuno-2.4km, ukuze ukwazi ukuyihlola ngokuhamba kosuku lokuya nokubuya. I izintaba umzila iqala futhi iqede endaweni yokupaka izimoto edolobheni lase-Umhausen.
Kumelwe uhlangane nabahamba ngezinyawo nabavakashi abaningi endleleni, ngakho-ke ungakhathazeki ngokuzizwa unesizungu noma ulahlekile.
IMunich kuphela 3 amahora amaningi ngesitimela ukusuka eStuibenfall. Ngakho, lokhu kusho ukuthi ungaphunyuka kalula ngempelasonto usuka edolobheni eliphithizelayo uye kwelinye lezimpophoma ezinhle kakhulu eYurophu. Ngakho, uzokujabulela kokubili emaphandleni neMunich eholidini lakho lasentwasahlobo eYurophu.
6. Izimpophoma zaseKrimml, Austria
Itholakala e-Austria ipaki yezwe ngobukhulu, Ipaki Yezwe Eliphezulu YaseTauern, impophoma yeKrimml iyimpophoma enamanzi amathathu, ekufinyeleleni 1490 m ekuphakameni futhi 380 m phezulu. Amahlathi asendulo, izilwane, izinyamazane ezibomvu, futhi izinkozi zegolide zimane nje zingezabantu bakulesi siqiwi abangahle bawele nawe endleleni eya kwenye impophoma emangalisayo eYurophu. Uma umuntu othanda amatende nomuntu ohamba izintaba onolwazi, le paki kanye nezimpophoma zaseKrimml zizoba yinto engalibaleki ezindaweni eziphakeme zase-Austrian.
Isimo esizungeze izimpophoma siphawuleka kakhulu entwasahlobo ngemuva kokuncibilika kweqhwa lapho izimpophoma zaseKrimml sezithela., izinyoni zicula kanye nezilwane ezinhle kakhulu zivuka ngemuva kobusika obude.
Ungashayela noma sithathe isitimela & ibhasi eya eKrimml izimpophoma. Uhambo lungaphansi 3 amahora ukusuka kuSalzburg futhi akusona isikhathi lapho uzobe uhamba epharadesi lase-Austria.
I-Munich kuya amathikithi e-Innsbruck
Amathikithi e-Salzburg kuya e-Innsbruck
I-Oberstdorf kumathikithi e-Innsbruck
I-Graz kuya amathikithi e-Innsbruck
7. Izimpophoma Ze-Gavarnie, France
Iphakathi esigodini esiluhlaza okotshani, izimpophoma eziphakeme zeGavarnie eFrance 422 amamitha aphezulu futhi athandwa kakhulu phakathi kwezivakashi. Ngokubona kwe-Hautes Pyrenees, i-Gavarnie waterfall iwuthando futhi ilungele abagibeli abanzima abafisa ukuhlola nokunqoba i Ama-French Pyrenees. Impophoma ye-Gavarnie kuphela 40 uhamba ngemoto kusuka esigodini saseGavarnie.
Izimpophoma ezinhle zisemngceleni phakathi kweFrance neSpain kumaPyrenees amahle kakhulu futhi kuphela 4 amahora amaningi ukusuka eToulouse ngesitimela.
IYurophu iyindawo yokuphupha kubahambi bodwa nemindeni. Kulula kakhulu ukuhamba kulo lonke iYurophu futhi zonke izimpophoma ezinhle ezikuluhlu lwethu zitholakala kakhulu ngesitimela noma ngebhasi, ngoba uhambo losuku noma ukumisa amatende, kubahambi abanolwazi noma abaqalayo abazizwa bemangele futhi bephupha ukuthola okuhle kunhlobo yemvelo yaseYurophu.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ekutholeni amathikithi ashibhile wesitimela nemizila yokuhamba kunoma iyiphi yezimpophoma ezinhle ezisohlwini lwethu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “7 Izimpophoma Ezinhle Kunazo Zonke eYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-waterfalls-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
europetravel Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi nbangibhabhi travelgermany Travelingtips travelswitzerland Izimpophoma IzimpophomaEEurope
Qeqesha Versus Bus EYurophu